Manaratsy ny Toerana misy ny Fitondran’i Azerbaijan ny Hetsipanoheran’ireo Reny any Nagorno Karabakh · Global Voices teny Malagasy
Tsy nitana ny teny nomeny tamin'ny vahoaka Azerbaijaney ny filoha.
Voadika ny 22 Avrily 2019 16:37 GMT
Efa roa volana izao, teo amin'ny 100 teo ireo reninà miaramila mpiady namoy ny ainy nandritra ilay ady nandravarava tany Karabakh no nitety andrimpanjakana, itadiavan'izy ireo ilay fanonerana nampanantenain'i Aliyev azy ireo tany am-piandohan'ity taona ity. Nalaina baraka foana izy ireo, nolazaina mba hiandry, na hitady fanampiana any an-kafa.
Reny iray tao anatinà tafatafa niarahany tamin'ny Meydan TV no nitanisa taratasy fito nalefany tany amin'ny andrimpajankana isan-karazana ary taratasy 20 hafa nalefany tany amin'ireo mpikambana tao amin'ny parlemanta. Kanefa tsy nisy na iray aza namaly ireo fanontaniany, hoy izy.
Nilaza tamin'ireo fianakaviana ny solombavambahoaka Hadi Rajabli, mpanao lalàna mpomba ny governemanta izay niresaka tamin'ireo fianakaviana tamin'ny 24 Oktrobra, mba ”tsy handoto ny dingana noraisin'ny Filohantsika tanatin'ity raharaha goavana ity.”
Nangataka ireo mpiasam-panjakana mba hampitsahatra ny laingany ny reny iray hafa niteny tanatinà tafatafa niarahana tamin'ny Hamam Times mifototra ao amin'ny Facebook.
Niseho tamin'ny lohateny lehibe an'ireo gazety Britanika ny vadin'i Hajiyev, Zamira, tamin'ny volana Oktobra 2018 noho ny filazàna fa nandany vola nihoatra ny $21 tapitrisa tamin'ny kara-bola maro tao amin'ny toeram-pivarotana Harrods tao Londra izy.
Nanasonia baiko mba hamoronana kaomisiona hanadihady ny toedraharaha manodidina ilay fifanolanana mikasika ny fanonerana i Ogtay Asadov, mpandahateny ao amin'ny Antenimieram-pirenena. Nefa tamin'ny Oktobra izany ary mbola tsy nisy na inona na inona nivoaka avy tamin'izy io.
5 andro izayKyrgyzstan